'Human Rights Watch': "Seerri haasaa jibbiinsaa Itoophiyaa bilisummaa yaada ofii ibsachu kan daangessudha' - BBC News Afaan Oromoo
'Human Rights Watch': "Seerri haasaa jibbiinsaa Itoophiyaa bilisummaa yaada ofii ibsachu kan daangessudha'
Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu 'Human Rights Watch' seerri haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuufi to'achuuf manni maree bakka bu'oota uummataa Kamisa raggaasise morme.
Dhaabbatichi ibsa baaseen seerichi ukkaamsaa fi hanqina danuu kan qabudha, mirga yaada ofii bilisaan ibsachuus balaaf kan saaxiludha jedheera.
Qorattuu olaantuun dhimmoota Afrikaa dhaabbaticha Latishiyaa Baadar, mootummaan Itoophiyaa hokkarawwaan biyyattii keessatti haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaan uumamaa jiran akka dhaabsisu dhiibbaan irra gahaa jira jetti.
Haa ta'u male seerri amma bahe wantoota ifa hin taane kan qabuufi waa qeeqanii dubbachuurratti dhorka bal'aa kan kaa'udha jetti.
Itoophiyaan labsii haasaa jibbiinsaa fi oduu sobaa ittisu raggaasifte
Mootummaan bu'uura seeraa kamiin intarneetii cufa?
Itoophiyaan nama haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa tamsaase hidhaan adabuuf
Wayita filannoon gaha jirutti mootummaan mirga yaadaa fi qeeqa ofii bilisaa ibsachuu jajjabeessuu qaba kan jettu qorattuun tun mootummaan haasaa jibbiinsa to'achuuf mala biraa barbaaduu qaba ture jetteetti.
Ogeeyyiin maal jedhu?
Bilisummaan yaada ofii ibsachuu jechuun nama arrabsuu, jibba tamsaasu fi oduu dharaa tamsasuu miti kan jedhan Yunivarsiitii Barmiingihaam Siitiitti qorataa dhimma miidiyaa kan ta'an obbo Qajeelaa Qannaa, "hawaasa nagaa dhabsiisa waan ta'eef sadarkaa biyyi keenya irra jirtutti seerri kun ni barbaachisaa" jedhu.
Ka'umsi seera kanaa heera biyyaattiiti kan jedhan Obbo Qajeelaan, namni waan barbaadu dubbachuuf mirga qabaatus daangaatu barbaachisa jedhu.
Itoophiyaatti miidiyaaleen hawaasa burjaajessan kanneen hawaasa qixa sirriin tajaajilan caalaa akka baay'atan dubbatu ogeessii midiyaan kun.
"Mootummaan seera kana wayita baasu mirgi namaa akka hin sarbamneefi jedhe baasa, hojiirra oolchuunis mootummaadhumarraa eegaluu qaba" jedhu Obbo Qajeelaan.
"Anga'oonni mootummaa waan dharaa feesbuukiisaani irratti yoo barreessuurra of qusachuun fakkeenya ta'an, namni kaanis irraa barachaa adeema" yaada jedhu qabu.
Namoonni duudha kana barachaa yoo adeeman malees si'a tokkichaan haasaa jibbaa kana dhaabuun hin danda'amu jedhu.
"Akkaataa seera kanaatti amma Itoophiyaatti namootni baayeen yakkamaadha" kan jedhan ogeessi kun seericha yeroo gababaa keessatti hojiirra oolchuun rakkisaa ta'uu akka malu garuu, dhawata dhawataan hojiirra oolchuun akka danda'amu himu.
Qaamni seera kana hojiitti hiikus barsiisuufi hubachiisuu qabaata jedhan.
Mormitoota Mirga Namummaa
Manni Maree bakka bu'oota ummataa walgahii ariifachiisaa taa'een labsi haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa to'achuuf qophaa'e irratti mar'achuun ragaasise.
13 Guraandhala 2020
25 Fuulbaana 2021
Paartiin Badhaadhinaa teessoo Paarlaamaa 410 injifachuu Boordiin Filannoo beeksise
Yeroo dhuma kan haaromfame: 10 Adooleessa 2021
Keeniyaan filmiin dokumantarii waa’ee jaalala saala walfakkaataa akka hin gadhiifamneef dhorkite